Public Health in Myanmar: Genetic Diseases and Inheritance Patterns (1)
thank you very much to read your genetics post and sharing your knowledge to me. i'll come around on next serious. happy new year
"Genetic Diseases and Inheritance Patterns (1)"
ဗဟုသုတ အတွက် ဖတ်သွားပါတယ်။
များမြှောင်လှတဲ့ ဆေးပညာ အသိပေး ပို့စ်တွေ အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
မျိုးရိုးဗီဇ ရောဂါများနှင့် အမွေဆက်ခံပုံ (၁) မှာ
သဏ္ဍန် ၄ မျိုးဖြင့် ကို သဏ္ဌာန် ၄ မျိုးဖြင့်၊ (အသွင်သဏ္ဍန်) ကို (အသွင်သဏ္ဌာန်) လို့ပြင်သင့်တယ်။